China Disposable ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Limeng
၁။ ၎င်းကိုလက်တွေ့တုပ်ကွေး၊ H7N9 ကဲ့သို့သောကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ လက်ခြေ - ပါးစပ်ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဝက်သက်နှင့်အခြားဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများ၊ mycoplasma, ureaplasma နှင့်ကလျမီဒီရာနမူနာများစုဆောင်းခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။
၂။ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဆက်စပ်သောနမူနာများကို ၄၈ နာရီအတွင်းအအေးခံသည့်နေရာ (၂-၈ ဒီဂရီ) တွင်သိမ်းဆည်းပြီးသယ်ဆောင်သည်။
၃။ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဆက်စပ်သောနမူနာများကို -80 ဒီဂရီသို့မဟုတ်နိုက်ထရိုဂျင်အရည်တွင်ကြာရှည်စွာသိုလှောင်ထားသည်။
A) ကိုစုဆောင်းနမူနာဗိုင်းရပ်စ် nucleic acid ကို၏ထောက်လှမ်းဘို့အသုံးပြုကြသည်ဆိုပါက, nucleic acid ကိုထုတ်ယူပစ္စည်းများနှင့် nucleic acid ကိုထောက်လှမ်းဓါတ်ကူပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရကြလိမ့်မည် ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးအတွက်အသုံးပြုလျှင်, ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုအလတ်စားအသုံးပြုသင့်သည်။
B) အမျိုးမျိုးသောလျှောက်လွှာလယ်ကွင်းနမူနာ၏အရည်ပမာဏ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမှာကြားရန်အချက်အလက်များအရသင့်လျော်သောထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
လက်တွေ့လူနာများထံမှဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများကိုစုဆောင်းရန်ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်အတွက်လိုအပ်သောအရည်ပမာဏသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 3.5ml (သို့) 5ml ဖြစ်သည်။
ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်အားကာလတိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်သောအရည်ပမာဏသည်ယေဘုယျအားဖြင့်5ml သို့မဟုတ် 6ml ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်အမည် - ဖယ်ရှားနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်
အရွယ်အစား: 18mm * 100mm 50 / box တွင်တစ် ဦး ချင်းစီပြွန် * 1, လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် * 1 ပါဝင်သည် box ကို။
Hank ရဲ့အရည်အခြေ၊ gentamicin၊ ဖန်းဂတ်စ်ပantibိဇီဝဆေး၊ BSA (V)၊ cryoprotectants, biological buffer နှင့် amino acids ။
Hank's ၏အခြေခံအရ BSA (BOVINE သွေးရည်ကြည် albumin ၏ပဉ္စမအုပ်စု)၊ HEPES နှင့်အခြားဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏အခြားသောတည်ငြိမ်သောအစိတ်အပိုင်းများသည်ဗိုင်းရပ်စ်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအပူချိန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပြိုကွဲခြင်းနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်အထီးကျန်၏အပြုသဘောဆောင်မှုနှုန်း။
မတူညီသောနမူနာလိုအပ်ချက်များအရ, swab သက်ဆိုင်ရာ site မှာနမူနာရန်အသုံးပြုသည်။
3. ချက်ခြင်းနမူနာပြွန်ထဲသို့ swab နေရာချ။
4. နမူနာပြွန်အထက်တွင်ရှိသည့် swab ၏အစိတ်အပိုင်းကိုချိုး။ ပြွန်အဖုံးကိုတင်းကျပ်ပါ။
၅။ အသစ်စက်စက်ကောက်ယူထားသောလက်တွေ့နမူနာများကို ၄၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၄၈ နာရီအတွင်းဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ဆောင်သင့်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်းဓာတ်ခွဲခန်းသို့သယ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်သောအရာများသည် -70 ° C သို့မဟုတ်အောက်တွင်သိုလှောင်ထားသင့်သည်။ နမူနာများကိုဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ပြီးသောအခါနမူနာများကို inoculated နှင့်အမြန်ဆုံးခွဲထားရမည်။ ၄၈ နာရီအတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုး။ ခွဲခြားနိုင်သည့်အရာများကို ၄ at အချိန်တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ၎င်းကို -70 'သို့မဟုတ်အောက်တွင်သိုထားသင့်သည်။
Pharyngeal swab - pharyngeal ဂလင်းတမျိုးနှင့်နောက်ခံ pharyngeal နံရံကို swab ဖြင့်သုတ်ခြင်း၊ နမူနာအဖြေတွင်ရှိသော swab ခေါင်းကိုစုပ်ယူပြီးအမြီးကိုဖယ်ရှားပါ။ (ဤထုတ်ကုန်နှင့်အတူနမူနာရန်သင့်တော်သည်)
ရှေ့သို့ တစ်ခါသုံး elastic earloop တီးဝိုင်း